ပန်နိုင်ငံ Nobeoka မြို့တော်ဝန်၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံဂျူဒိုအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းထွန်း၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးဦးခိုင်နှင့် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်သောဦးမင်းသိန်းနှင့် ဦးဇော်ထွန်းနိုင် တို့ပါဝင်သော မြန်မာဂျူဒိုအဖွဲ့သည် ၂၀.၄.၂၀၁၉နေ့မှ ၁.၅.၂၀၁၉ နေ့ | Myanmar Judo Federation
Myanmar Judo Federation
ပန်နိုင်ငံ Nobeoka မြို့တော်ဝန်၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံဂျူဒိုအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းထွန်း၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးဦးခိုင်နှင့် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်သောဦးမင်းသိန်းနှင့် ဦးဇော်ထွန်းနိုင် တို့ပါဝင်သော မြန်မာဂျူဒိုအဖွဲ့သည် ၂၀.၄.၂၀၁၉နေ့မှ ၁.၅.၂၀၁၉ နေ့
"၁.၅.၂၀၁၉ ညနေ ၀၄း၃၀ နာရီ " ဂျပန်နိုင်ငံ Nobeoka မြို့တော်ဝန်၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံဂျူဒိုအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းထွန်း၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးဦးခိုင်နှင့် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်သောဦးမင်းသိန်းနှင့် ဦးဇော်ထွန်းနိုင် တို့ပါဝင်သော မြန်မာဂျူဒိုအဖွဲ့သည် ၂၀.၄.၂၀၁၉နေ့မှ ၁.၅.၂၀၁၉ နေ့အထိ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိ လာခဲ့ရာ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၌ ဂျူဒိုအဖွဲ့ချုပ်ဒုဥက္ကဌ ဦးအေးကြည် ဦးဆောင်သော အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ ဝင်များ၊ဂျူဒိုလက်ရွေးစင် အားကစား မောင်မယ်များ ဆပ်ကော်မတီများမှ တာဝန်ရှိသူများ ကြိုဆိုခဲ့ကြပါသည်။ သတင်းဌာနများမှ သတင်းထောက်များ မှလည်း သတင်းလာရောက်ယူခဲ့ကြပါ သည်။ မြန်မာနိုင်ငံဂျူဒိုအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းထွန်းဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ခရီးစဉ်အတွင်း *ဂျပန်နိုင်ငံ Nobeoka မြို့တော်ဝန် Mr.Yoji Yomiyama ဒုတိယမြို့တော်ဝန် Mr.Takashi Arai တို့နှင့် တွေ့ဆုံကာ Nobeoka City တွင် Host Town and Cultural Exchange အကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း၊မြန်မာ-ဂျပန် ဂျူဒိုအားကစား တိုးတက်ရေး၊ အပြန်အလှန် Joint Training ပြုလုပ်နိုင်ရေးနှင့် တိုးတက်နေသည့် ဂျူဒိုအားကစားနည်းစနစ်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးတို့အပြင် *Kodokan Judo Institute ဥက္ကဌ Mr.Haruki Uemura နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း၊ *All Japan Judo Federation ဥက္ကဌ Mr.Yasuhiro Yamashita နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း၊ *Kodokan ဥက္ကဋ္ဌ Mr.Haruki Uemura မှ မြန်မာနိုင်ငံဂျူဒိုအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဦးထွန်းထွန်း အား 3rd Dan ချီးမြှင့်ခြင်းကို လက်ခံရယူခြင်း၊ *မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်မည့် နည်းပြဆရာ Mr.Shuji Ohshima နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း၊ *မြန်မာနိုင်ငံဂျူဒိုအဖွဲ့ချုပ် ဂုဏ်ထူးဆောင် နာယက Mr.Shinro FUJITA အား တွေ့ဆုံ၍ အသိအမှတ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ ပေးအပ်ခြင်း၊ *All Japan Judo Championship ဂျူဒိုပြိုင်ပွဲအား သွားရောက် ကြည့်ရှု အားပေးခြင်း၊ *Tokyo Judo Therapy ကျောင်းသို့ သွားရောက်လေ့လာခြင်း စသည်တို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။ Ustl(mjf)
(+95-1)380772, FAX- 374941
National Swimming Pool,U Wisara Rd.,Dagon Township, Yangon, Myanmar.
Copyright © 2021, Myanmar Judo Federation.
All Right Reserved. Designed by Triple Luck Digital